४ वर्ष अघिदेखि अध्ययन थालिएको भेरी पम्पिङ आयोजना अझै शुरु भएन
२०७८ मंसिर, ४
मंसिर ४, सुर्खेत । निर्माणपूर्वका कार्य सम्पन्न गर्न ढिलाइका कारण भेरी पम्पिङ आयोजना प्रभावित भएको छ ।
दशैंअघि टेण्डर आह्वान गर्ने भनिए पनि जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावबारे अध्ययन बाँकी नै रहेकाले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको हो ।
आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) भइसकेको छ । प्रदेश राजधानी सुर्खेत उपत्यकाको खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने उद्देश्यले विश्व बैंकको सहयोगमा भेरी पम्पिङ आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो । चार वर्षदेखि अध्ययन थालिए पनि आयोजना निर्माणको चरणमा भने प्रवेश गरेको छैन ।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर सुरत बमले लगानीको सुनिश्चितता भए पनि आयोजनाको दिगो व्यवस्थान पक्षको टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको बताए । ‘विश्व बैंकले आयोजना सञ्चालनको दिगोपनाबारे सुनिश्चितता खोजेको छ’, उनले भने, ‘कानूनी आधार, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलगायतका विषयमा टुंगोमा पुग्न आवश्यक छ ।’
हाल सुर्खेत उपत्यका खानेपानी तथा उपभोक्ता संस्थाले आयोजनाका लागि व्यवस्थापकीय सहयोग गर्दै आएको छ । यस संस्थालाई कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
सुर्खेत उपत्यका खानेपानी तथा उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष कूलमणि देवकोटाले आगामी ३० वर्षसम्म बढ्नसक्ने जनसंख्यालाई आधार मानी आयोजना निर्माण गर्न लागिएको बताए । ‘आयोजना निर्माणमा अब कुनै द्विविधा छैन, डिपिआर र अन्य अध्ययनका काम सम्पन्न भइसके, अब संस्था सञ्चालनको मोडालिटीबारे छिटै टुंगोमा पुग्छौँ’, उनले भने, ‘लगानीको स्रोत जुटिसकेकाले अब जग्गा प्राप्तिसँग जोडिएका केही काम पूरा हुनासाथ निर्माण प्रक्रियामा आयोजना अघि बढ्छ ।’
आयोजनाको भौतिक संरचना निर्माण गर्ने स्थानमा वन क्षेत्रले ओगटेको छ । आयोजना निर्माणका लागि विश्व बैंकले ७० प्रतिशत र नेपाल सरकारले ३० प्रतिशत खर्च बेहोर्ने छ । पहिलो चरणमा संरचना निर्माणका लागि रू. तीन अर्ब २३ करोड लागत अनुमान छ ।
जसअन्तर्गत मुहान इन्टेक, रिर्जब ट्यांकी, पाइपलाइन निर्माण र दोस्रो चरणमा सेवा विस्तारका काम हुनेछन् । आयोजनाका निर्माणका लागि रू. छ अर्ब लाग्ने अनुमान छ ।
भेरी पुल र झुप्रा खोलाको दोभान नजिकबाट पानी पम्पिङ गरी अमृतडाँडा ल्याउने र त्यहाँबाट उपत्यकामा वितरण गर्ने योजना छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका अनुसार भेरीको पानी ४०० मिटरमाथि प्रशोधन गर्ने ट्यांकीमा खसालेपछि त्यसबाट अमृतडाँडासम्म सात किलोमिटर लामो पाइप बिछ्याइनेछ । ५५० मिलिमिटर वा सोभन्दा बढी आकारको पाइप अमृतडाँडामा राखी मुख्य ट्यांकीसम्म जडान गरिनेछ ।
त्यहाँ बनाइने ट्यांकी १२ हजार घनमिटरको हुनेछ । हाल सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाले २० हजार घरधुरीलाई खानेपानी वितरण गर्दै आएको छ भने अझै १८ हजार धारा अपुग रहेको बताइएको छ । रासस
६ वर्षमा पनि स्तरोन्नति भएन लामोसाँघु–जिरी सडक[२०७८ मंसिर, १७]
हिमपातपछि हुम्लामा बढ्यो चिसो, जनजीवन कष्टकर[२०७८ मंसिर, १६]
खाद्यका लागि कृषि अभियान[२०७८ मंसिर, १६]
हुम्लामा हेलिकप्टरबाट ७८ क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी[२०७८ मंसिर, १४]
भारत–नेपाल–चीन जोड्ने त्रि–देशीय सडक ओझेलमा[२०७८ मंसिर, १३]
थप २४६ जनामा कोरोना संक्रमण, मृत्यु हुनेको संख्या शून्य
२५ ओटा कम्पनीद्वारा ६ अर्ब ८० करोड बराबरको आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारी
नेपाल र कतार बीच श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने सहमति
दोब्बर रकम दिन्छु भन्दै ठगी गर्ने २ जना पक्राउ
तस्वीर : कञ्चनपुरको दोदा नदीमा निर्माणाधीन पक्की पुल